Serivisy Prototyping haingana, famokarana haingana - Createproto
Manomboka amin'ny Design hatramin'ny Prototyping ka hatramin'ny Production, dia vonona foana izahay ny hamadika ny hevitrao ho tena zava-misy ary hanome vahaolana fanamboarana mandroso mety amin'ny vokatrao.
Prototyping sy fanamboarana haingana
Izahay no mpiara-miasa R&D azo antoka. Manomboka amin'ny famolavolana CAD ka hatrany amin'ny prototype ara-batana eo am-pelatananao, ary farany amin'ny ekipanao, haingana kokoa noho ny hatramin'izay izy io. Izahay dia namolavola ny haitao haingana indrindra momba ny prototyping haingana hanatratrarana ireo fanambin'ny famolavolana anao, ary hiara-hiasa aminao izahay hanamarina sy hanatsarana ny hevitrao momba ny vokatra, ny fanandramana ary ny fanamarinana ny injeniera. Ny serivisy prototyping haingana dia misy ny prototyping CNC, fanontana 3D, fanariana fantsona, fitaovana haingana, prototyping metaly ary famaranana prototype.
JEREO NY MATERIALS
Casting Vacuum Urethane
Alao sary an-tsaina ny karazana prototype haingana indrindra
Rehefa manohy ny dianao mandroso sy mitondra vokatra vaovao eny an-tsena ianao dia manana andiana fanapahan-kevitra raisina momba ny prototyping - na handefa fitaovana na vokatra rindrambaiko ianao, na ny fitambaran'izy roa - mila manana prototype vita ianao. Rehefa avy nametraka tamim-pahombiazana ny fototry ny fizotran'ny fampandrosoana ianao ary nampiomana ny maodelin'ny CAD dia tonga amin'ny safidy manaraka ianao. Alohan'ny hanaovana prototype ny zavatra noforoninao dia mila manapa-kevitra ianao hoe karazana prototype inona no haorinao. Na manao ny tenanao ianao na manakarama orinasa prototyping haingana dia tokony ho fantatrao ny tanjona hotanterahin'ilay prototype satria hanampy amin'ny fisafidianana fomba sy teknika ary fitaovana ilaina amin'ny fananganana izany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia andao isika hamaky ireo karazana prototypes sy tanjona ao ambadiky ny fananganana azy ireo.
Createproto. Fitaovana fanapahana.
Rehefa ampidirinao amin'ny ekipanao ny CreateProto dia mahazo vokatra ianao amin'ny traikefa efa an-taonany natambatra tamin'ny fahalalana sy ny fahaizany tamin'ny faran'ny teknolojia. Ity fifangaroana ity dia ahafahantsika manolotra vahaolana manokana momba ny injeniera sy ny famokarana, amin'ny alàlan'ny karazana metaly, plastika ary fitaovana exotic rehetra, amin'ny fandaharam-potoana sy amin'ny fahombiazana azonao ianteherana hatrany.
Mampiasà ampahany MIFANDRAISA AMINAY
Ahoana no hiaraha-miasa aminay
Ampidiro ny rakitra CAD
Hanombohana, tsindrio fotsiny ny fizotran'ny famokarana ary mampakatra rakitra 3D CAD.
Azontsika atao ny manaiky ireto karazana fisie manaraka ireto:
> DINGANA (.stp)
> Parasolid (.x_t na .x_b)
> fisie .stl:
Jereo ireo rakitra ekena
Afeno ireo rakitra ekena
Ny famakafakana ny famolavolana dia tanterahina
Tao anatin'ny ora vitsivitsy dia handefasanay ny famolavolana ny famakafakana (DFM) fanadihadiana sy ny vidiny amin'ny tena izy ianao.
Miaraka amin'ny vidiny marina,
ny teny ifampiresahana ataonay dia hiantso izay sarotra amboarina amin'ny endri-javatra
amin'ny fizotry ny famokarana nofidinao. Izany dia mety miainga avy any ambanin'ny sarotra amin'ny bobongolo ka hatramin'ny lavaka lalina amin'ny faritra masinina.
Manomboka ny famokarana
Raha vantany vao jerenao ny teny nataonao ary napetrakao ny kaomandinao dia hanomboka ny fizotran'ny famokarana izahay. Manolotra safidy farany ihany koa izahay.
Manolotra safidy isan-karazany amin'ny famaranana ho an'ny serivisy famokarana rehetra izahay. Ireo dia mety miainga amin'ny famaranana palitao vita amin'ny vovoka ary manodinkodina hatrany amin'ny fidirana ifotony sy fampidirana misy kofehy.
>Machining Aluminium CNC
>Machining Prototype CNC
> Casting Vacuum Urethane
> Fanontana 3D:
Ny ampahany dia alefa!
Ny fizotry ny famokarana dizitaly antsika dia ahafahantsika mamokatra ampahany haingana 3 andro.
Fahombiazana manerana ny indostria
Jereo ny fomba ampiasain'ny orinasa manerantany indrindra ny famokarana dizitaly ho an'ny famokarana prototyping haingana sy tinady. Manome indostria maro karazana izahay, manomboka amin'ny fitaovana fitsaboana mamonjy aina ka hatramin'ny singa maotera aerospace.
JEREO IZAO IREO indostrialy
102, tranobe faha-3, làlana Tanglian 3, Tanànan'i Tangxia, Dongguan, 523710
Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping, Cnc Prototyping haingana,